I-China Aluminium ingxubevange yemishini yezesekeli yomkhiqizi nomhlinzeki | DOWODA
Izesekeli zemishini ye-aluminium alloy
igama lomkhiqizo Izesekeli ze-aluminium alloy electronics uhlobo lomkhiqizo Isigaba sedijithali
Ukuxazulula inkinga yomshini wokuhamba we-CNC:
Inqubo yokuhlaziya yamaphutha kagesi nayo iyinqubo yokuxazulula inkinga. Ngakho-ke, ezinye izindlela ezijwayelekile zokuxazulula inkinga zamaphutha kagesi zethulwe ngokuphelele kuzindlela zokuhlaziya ezingenhla. Manje, kubhalwe amaphutha amaningi kagesi ajwayelekile.
1. Ukunikezwa kwamandla Ukunikezwa kwamandla kungumthombo wamandla wokusebenza okujwayelekile kohlelo lokulungisa kanye nawo wonke umshini wokuhamba we-CNC. Uma yehluleka noma iphutha lincane, lizolahlekelwa yidatha futhi lidale ukucisha. Ezimweni ezinzima, kungahle kucekele phansi ingxenye noma lonke uhlelo.
Amazwe aseNtshonalanga anamandla anele nekhwalithi ephezulu yegridi, ngakho-ke ukucatshangelwa kwesistimu yamandla abo kuncane. Lokhu akwenele kancane kumanethiwekhi wokuhambisa ugesi ngokushintshashintsha okukhulu nama-harmonics aphezulu eChina. Izici, akunakugwenywa ukuthi kuzoba khona ukwehluleka okubangelwa ukunikezwa kwamandla. Kufanele sizame konke okusemandleni ukuklama uhlelo lokuphakelwa kwamandla komshini wokuhamba we-CNC:
Nikeza ibhokisi lokusabalalisa elizimele ngaphandle kokusebenzisa uchungechunge neminye imishini;
Is Kukhona inhlabathi enhle ekuqaleni kokunikezwa kwamandla;
③ Izindawo ezinekhwalithi ephansi yokuphakelwa kukagesi kufanele zifakelwe amadivayisi okuzinzisa wezigaba ezintathu ze-AC;
Layout Ukuhlelwa kwezakhi zikagesi kwikhabethe kanye nokufakwa kwezintambo ze-AC neDC kufanele kuhlukaniswe komunye nomunye.
Supply Amandla wesigaba sesithathu angena kumshini wokuhamba we-CNC kufanele asebenzise uhlelo olunezintambo ezinhlanu olunezintambo ezinhlanu, futhi i-neutral (N) nomhlabathi (PE) kuhlukaniswe ngokuqinile;
2.) I-loop yesikhundla sohlelo lokuhamba lwe-CNC ayilungile
OsitionPosition loop alamu. Kungenzeka ukuthi iluphu yokukala isikhundla livulekile; isici sokulinganisa sonakele; isibonisi esibonakalayo esisungulwe ukulawulwa kwesimo asikho.
Ax I-eksisi yokuxhumanisa ihamba ngaphandle komyalo. Kungenzeka ukuthi ukukhukhuleka kukhulu kakhulu; i-loop position noma i-loop loop ixhunywe kwimpendulo enhle; izintambo zempendulo zivulekile; into yokulinganisa Izingcezu zilimele.
3. Iphuzu le-zero lokuxhumanisa komshini wokuhamba we-CNC alitholakali. Kungenzeka ukuthi ukuqondiswa kuka-zero kukude nephoyinti elingu-zero; isifaki khodi sonakele noma izintambo zivulekile; umaki wephuzu le-zero we-grating uyashintshwa;
Iswishi yesivinini yehlulekile.
4. Izici eziguquguqukayo zomshini oyinhloko we-NC ziba zimbi kakhulu, ikhwalithi yokusebenza iyancipha, futhi umshini oyisisekelo udlidliza ngejubane elingaguquguquki. Kuningi kwalokhu-uhlobo kungenzeka
Igebe lohlelo lokudlulisela ngomshini likhulu kakhulu noma ligqokwe kakhulu, noma ujantshi wesikhombi awuthanjiswanga ngokwanele noma awugugile; kungaba iluphu yejubane yohlelo lokulawula ugesi
I-loop yesikhundla namapharamitha ahlobene awasekho esimweni esihle kakhulu sokufanisa, futhi kufanele siphinde sithuthukiswe ngemuva kokuthi iphutha elenzelwe lisuswe ngokuyisisekelo.
5. Ukuhluleka kokuvalwa ngezikhathi ezithile. Kunezimo ezimbili ezingenzeka lapha: Isimo esisodwa ukuthi inkinga kwisoftware ehlobene
Ukwehluleka ukuvala shaqa ngaphansi kokuhlanganiswa kokusebenza nokusebenza kokujwayelekile kuzonyamalala ngemuva kokuthi umshini oyinhloko we-CNC uvaliwe ngemuva kokucishwa kwamandla; esinye isimo sidalwa yizimo zemvelo
, Njengokuphazanyiswa okunamandla (igridi noma okokusebenza okuphathelene nomngcele), izinga lokushisa eleqile, umswakama owedlulele, njll. Le nto yezemvelo ivame ukunganakwa ngabantu, njenge
Umshini wengqondo ufakwa ebhilidini elejwayelekile lemboni noma ngisho nasendaweni evulekile enkulu "], futhi ikhabethe likagesi livulwe isikhathi eside, futhi kunemishini eminingi enjengothuli olukhiqizayo, ukushefa kwensimbi, noma inkungu yamanzi eduzane.
Linda. Lezi zinto ngeke nje zibangele ukwehluleka, kodwa futhi zilimaze kakhulu uhlelo lomshini wokuhamba. Qiniseka ukuthi unake ukuthuthuka.
Langaphambilini Imishini yokuxhumana ye-Aluminium alloy
Olandelayo: Izesekeli zensimbi zeshidi
Ishidi lensimbi chassis shell
I-Aluminium alloy prototype
Izingxenye ze-aluminium ezingajwayelekile
5-eksisi CNC Lathe, Cnc Engagqwali Icubungula, Cnc Precision Izingxenye Icubungula, Icubungula i-Hand Hand Board, Cnc Machining Center Icubungula, Imishini Yezinsimbi Zemishini,